Dokotera mampanantena loha voalohany taova manao dity ho US dokotera - News Fitsipika
Dokotera mampanantena loha voalohany taova manao dity ho US dokotera
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Dokotera mampanantena loha voalohany taova manao dity ho US dokotera” nosoratan'i Sam Thielman in Annapolis, fa theguardian.com ny Sabotsy 13 Jona 2015 12.38 UTC
Ny zoma tolakandro tao amin'ny Westin Hotel in Annapolis, Maryland, miaraka ny mpirotsaka an-tsitrapo ho an'ny olombelona voalohany lohany taova eo am, Dr Sergio Canavero nanao dia asao ho fitadiavana mpandidy vonona ny hanampy azy hanao ny fomba avy amin'ny mpanatrika ny namany dokotera tao amin'ny fivoriana fanao isan-taona ny Akademia Amerikanina ny atidoha sy ny Orthopaedic Vitan'ny dokotera mpandidy.
Tokony ho ampahefatry ny seza nomena eo lahatsary fakan-tsary, tripods sy ny jiro ho an'ny masoandro. Mba hahazoana ny gazety-pirahalahiana dokotera ho eo anoloan'ny trano, iray amin'ireo mpanatrika maintsy handray ny lampihazo micro sy Bellow ho any an-scrum manodidina Canavero: "'Scuse ahy, mpanao gazety, Tiako ho anareo mankany aoriana eny, Mba miangavy re. Ampy dia ampy. "
Ny lohahevitra momba ny Canavero ny keynote dia fomba dia manantena hanao ao amin'ny manaraka 24 volana, izay niantso Head Anatomosis orinasa, na "Lanitra".
"Androany aho eto mba hanome antsika ny fahitana rehetra,"Hoy Canavero.
Ny dokotera koa fa tsy nisy zavatra toy izany ho toy ny tena, ary ny farany ny tanjon'ny tetikasa dia ny fiainana fanitarana.
Nandritra ny roa ora sy sasany (ny fampisehoana dia hatao ny 90 minitra) eo anoloan'ny mpanatrika ny ankamaroany manga- sy fotsy volo-mifanaraka efa zokinjokiny mpandidy, Canavero dava ny sakan'ny trano ny ela ao amin'ny crème slacks sy tera-mena akanjo volontsôkôlà, bespectacled, nanaratra ny lohany, mijery toy ny tena nahatapaka ranjo moanina.
Sergio Canavero izay milaza izy dia ho afaka hanao ny lohany taova. Sary: Youtube
Dia nandany ny tapany voalohany-ora nitifitra aphorism intsony aorian'ny aphorism, ny sasany ny mpanoratra anisan'izany Kierkegaard sy Arthur C Clarke, ny hafa ny ny hevitra,.
"Raha lanitra dia Sahisahy ratsy, toetra no crazier, sy ny maha tsy maintsy omena Pause rehefa ny zavatra ataony ho antsika toy ny zavaboary rehetra eto an-tany,"Hoy izy.
Ny neurosurgeon, ny Italia ny Turin Advanced Neuromodulation Group, veered eo miezaka aingam-panahy ny mpihaino azy, fikarohana lalina ho neurobiology sy goading ny fotsy volo matihanina ara-pitsaboana nivory teo anoloan'ny azy. Nisy fotoana dia nampitaha ny fomba fahombiazana ny ho avy ho an'ny volana fipetrahana, miaraka amin'ny sary ny JFK teo amin'ny efijery ivohony.
"Tsy maintsy mandeha any amin'ny volana mba hitsapana hoe iza moa isika, mba hitsapana ny fahaiza-manao, mba hitsapana ny hatoky, mba hahitana izay karazana olona isika!"Hoy izy.
"Tsy maintsy manao izany mba hizaha toetra America! Tsy maintsy manao izany mba hahitana raha mbola Amerikana! Rehefa nihalehibe i Amerika an-tampony. "
Nampanantena karama avo sy ny fanohanana amin'ny "American miliaridera", Canavero nilaza tamin'ny fiangonana: "Tonga tany aminareo aho; Faly nanaiky izany aho manasa ny manetry tena sy ho tonga eo anatrehanao mba hanao raharaha fa izany no azo atao. "
Efa hoy izy mikasa ny hanao ny fomba na any Etazonia na ny Shina.
Ny fanetren-tena dia tsy misy toetra ny mpanatrika toa pon'i Canavero.
"Ry olona rehetra manana fahatsapana teny tena, Tsy nofinofy,"Hoy ny voalohany dokotera mba mampidi-fanontaniana ao amin'ny Q&A fivoriana. "Inona no tena marary? Ny vatana vaovao, na ny tena izay mijaly amin'ny?"
"Anontanio azy ianao,"Hoy Canavero.
Valery Spiridonov, ny olona izay efa nanolo-tena hiaritra ny paika, niteny firy amin'ny fanangonana, fa Izy isa ny tombontsoa lehibe. Spiridonov Werdnig-Hoffmann manana aretina, na hazondamosina hozatra atrophy. Izany dia manimba, farany hahafaty ny toe-Izay efa naka ho hita fiantraikany eo amin'ny 30 taona ny vatana Rosiana. Nanoratra e-mail Spiridonov Canavero avy tao an-manga, rehefa ny tetikasa ny dokotera, ka nandray ny mpanao gazety ny saina.
Valery Spiridonov: 'Mino aho fa ny tena marina haihetsika izay tiako ny nanesorako ny' Sary: Corbis
Spiridonov dia namaly ny fanontaniana.
"Mino aho fa ny tena marina haihetsika izay tiako ny nanesorako ny,"Hoy izy. Niresaka momba ny tsy maintsy nanakarama olona mba hanampy azy amin'ny toerana kely akaikin'ny seza misy kodiarana ny sehatra.
Dokotera hafa, Said Canavero, efa nanontany na tsia ny fandavana avo tahan'ny ifotony taova sy ny rantsambatana transplants mety midika fa feno taova marary vatana mety hiala amin'ny saina. Canavero nilaza tamin'izy ireo mba sary an-tsaina ny tenany ao amin'ny Spiridonov ny toerana.
"Mino ve ianao fa ny toe-javatra mety handroaka anareo ho adala, ny fahaverezan-tsaina?"Hoy izy nanontany Spiridonov.
"Eny,"Hoy Spiridonov. "Isan'andro."
Ahoana kosa ny amin'ny Précédent hazondamosina lalan-dra?
Ny fanontaniana hafa, mazava ho azy, dia na na tsy azo atao ny fandidiana. Nanondro Canavero doha transplants amin'ny totozy nahomby atao any Shina, ary nilaza fa polyethylene glycol (Fihantonan-javatra) - Izay matetika ampiasaina ho toy ny laxative, fa efa hita ny tsy fampiharana ny hazondamosina ratra marary - afaka ankapobeny fanambàrana ny moto toerana ny hazondamosina tady miaraka soa aman-tsara indray rehefa efa hosarahina.
Dokotera iray nanapaka Canavero eo afovoan'ny ny lahateny mba milaza fa, toy ny lalan-dra mpandidy, Nanahy izy ny, ankoatra ny hafa, Précédent hazondamosina ny lalan-dra.
"Ataovy iany ianao tsara amin'ny alalan'ny izany,"Hoy izy. Canavero nanasa azy hiditra ny fiàsan'ny vondrona, nanao hoe: efa nanao ny anjara ary ankehitriny dia tonga ny fotoana ho azy ireo hampiasana ny.
Ny dokotera dia nizara tamin'ny na tsia hanatanteraka ny paika rehetra. Moa ve ny lohany taova etika?
"Tsy fantatro,"Hoy Oscar Tuazon, ny mpandidy teo akaiky teo mipetraka any Alexandria. "Amin'ny olombelona, ny zava-dehibe dia ny loha! Ny vatana fotsiny ihany ny rafitra na ny akora. Noho izany ny lohany izay zava-dehibe. Angamba, andao hoe, Raha misy olona lehibe, toy ny Einstein, angamba afaka hiaro azy. "
Tuazon nanatrika ny fihaonambe amin'ny Edith Tuazon, mpitsabo mpanampy sy ny vadiny ny 44 taona. Izy unconvinced.
"Izaho no mahatsapa toy izany lasa lavitra,"Hoy izy. "Aoka hatao hoe manana filoha taova ny olona no mpanakanto sy ny amin'ny olona iray izay tsy mpanakanto -will izany olona ho afaka hanao ny fitaovam-piadiana sy ny tanana mbola hanatona? Moa ve ny tanana mbola 'mihevitra?'Ho toy izany dia hieritreritra ny taloha? Inona no asa rehetra handeha miara-miasa?"
Canavero dia ny valin-fa ny iray ao amin'ny fanolorana: "Tsy nanapaka ny spaghetto, ianao mampihatra ny fihantonan-javatra, ary Boom. "
Asus Namoaka Ny Padfone Infinity Refresh amin'ny Snapdra ...
CRISPR: no hevitra tsara ny 'hanatsarana' ny ADN?...
Kanseran'ny nono fanantenana toy ny hormonina aseho mba hampihena fivontosana ...
18496	0 Article, Medical fikarohana, News, Sam Thielman, Science, US vaovao, World vaovao
← New fianarana milaza ho mahita fototarazo rohy eo amin'ny famoronana sy ny aretin-tsaina The 11 PlayStation lalao anao tanteraka tsy afaka malahelo ao amin'ny taona ho avy →